FIATREHANA NY FIHODINANA FAHAROA :: Samy nisantatra ny praopagandy tamin’ ny fotoam-pivavahana ireo kandidà roa • AoRaha
FIATREHANA NY FIHODINANA FAHAROA Samy nisantatra ny praopagandy tamin’ ny fotoam-pivavahana ireo kandidà roa
Raikitra ny fampie­lezan-kevitra ho amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Tsy nisy niala tato anatin’ny Faritanin’Antana­narivo ireo kandidà roa mpifaninana, dia Rajoelina Andry sy Ravalomanana Marc, omaly. Samy nanomboka tamin’ny fotoam-pivavahana ny roa tonta.
Efa nahavita fitetezana tanâna maro sahady kosa ny kandidà laharana faha-13 tany aminy faritra Itasy iny. « Tsy maintsy mandresy isika », hoy izy.Tany Ampefy misy ny sary vongana lehibe an’
i Masina Maria, izay sady ivon’i Madagasikara no nangata-tso-drano nandritra ny lamesa manokana Rajoelina Andry. Tetsy amin’ ny foiben-toeran’ny Tim, etsy Ankadivato, kosa no nanao fotoam-pivavahana Ravalomanana Marc sy ireo mpomba azy.
Taorian’ny fotoam-pivavahana izay notarihin’ny pretra miisa telo tany Ampefy dia namakivaky avy hatrany ny Faritra Itasy sy Antananarivo Atsimondrano ny Filohan’ny tetezamita teo aloha. Ireo mponin’Ampary, Analavory, Soavinandriana, Tanjombato ary Itaosy no samy nandray tamin-kafaliana ny kandidà Rajoelina Andry.
Nivoitra tamin’ireo fihaonana ireo ny velirano nataon’ ny kandidà laharana faha-13 tamin’ireo vahoaka. “Nisafidy ity toerana eto Ampefy ity aho satria eto no Ivon’i Madagasikara. Eto no hanaovako velirano aminareo fa tena hampandroso ny firenena. Hanao izay faraheriko amin’ny fampandriana fahalemana ny ambanivohitra sy an-drenivohitra aho”, hoy izy nilokaloka nanoloana an’ireo olona maro.
Teny Tanjombato indray nanazava ny fandaharanasany amin’ny tontolon’ny fandraharahana ho an’ny daholobe Rajoelina Andry. “Manao velirano aminareo ny tenako fa hisy ny orinasa be dia be haorina rehefa tonga eo amin’ny fitondrana isika. Ny an’ny sasany hamelona ny orinasany no mahamaika azy rehefa tonga eo amin’ny fitondrana fa isika kosa hanangana orinasa famokarana simenitra, fanamboarana fitaovana mamokatra herinaratra avy amin’ny masoandro sy ny maro hafa”, hoy izy.
Tsy nanadino niantso fanampiana tamin’ireo mpa­natrika azy Rajoelina Andry mandritra ireo fampielezan-kevitra nataony, omaly, ireo. “Ampio aho mba hahafahako manampy anao sy manavotra ity firenentsika ity”, hoy izy.
Hamehana ara-pahasalamana Manohitra ny fanararaotana politika amin’izao toe-draharaha izao ny K3F
Fitaterana vonjy maika Tafakatra avo roa heny ny saran-dalana mihazo ny faritra
Fonjan’Antsirabe Nandraisana fepetra ireo gadra vaovao
FIKASANA HITOKONA :: Mitaky ny fialan’ny orinasa rosianina ny mpiasan’ny Kraoma
BAOLINA KITRA – “BALLON D’OR” :: Mpilalao voalohany voahosotra avy any Croatie i Luka Modric